Muqdisho oo la ballaarinayo – Kalfadhi
Muqdisho oo la ballaarinayo
Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka ayaa kulan ay la qaateen guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaa diiradda lagu saaray suurta galnimada in la ballaariyo soohdimaha caasimadda.
Duqa magaalada Muqdisho mudane Yariisow ayaa u soo jeediyay Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka Somalia in soohdinta caasimadda lagu xadeeyo webiyada Afgooye iyo Balcad maadama ay caasimadda hadda ay marti galinayso barakacayaal badan oo gudaha iyo daafaha caasimaddaba ku nool sidaas darteedna loo baahan yahay in la ballaariyo.
Kulanka guddoomiyaha iyo guddiga
Guddoomiye Yariisow ayaa yiri “ Maadaama uu dalku yahay Federaal, caasimadduna ay ka ballaaratay intii hore waxaa muhiim ah in laga wada-xaajoodo mustaqbalka sidii loo gaarsiin lahaa soohdinta hadda jira labada Wabi ee Balcad iyo Afgooye ”.
Guddoomiyaha ayaa sheegay ahmiyadda ay arrimahan u leeyihiin wadatashiga dadweynaha, si go’aannada la qaadanayo u noqdaan kuwa ku saleysan rabitaanka bulshada, “ Baahida loo qabo in caasimaddu ay sii ballaarato waa mid weyn, maadaama xiligan ay ku nool yihiin tiro aad uga badan waqtiyadii hore, waxay bulshada Caasimaddu ay tallo ahaan soo jeediyeen in la gaarsiiyo soohdinta caasimadda labada Wabi ee Balcad iyo Afgooye.” ayuu yiri Eng Yariisow.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka mudane Khaliif Cabdikariin Maxamed oo duqa Muqdisho uga warbixinaayay shaqada guddiga ay qabtaan ayaa shaaca ka qaaday inay horyaallaan shaqooyin muhiim ah oo ku saabsan sameynta soohdimaha maamullada dalka.
Dhimista sinnaan-la’aanta dheddigga iyo labka: Taariikhda haweenka Soomaaliyeed in lagu qoro Wikipedia
Sidee Buu U Dhacay Kulankii Siddeedaad Ee Golaha Shacabka